Wasiirka Arrimaha dibedda Somalia ma aaminsana Midnimada Somalia (Dhageyso Wareysi ay bixisay) - Caasimada Online
Home Warar Wasiirka Arrimaha dibedda Somalia ma aaminsana Midnimada Somalia (Dhageyso Wareysi ay bixisay)
Wasiirka Arrimaha dibedda Somalia ma aaminsana Midnimada Somalia (Dhageyso Wareysi ay bixisay)
Markii aan dhageystay wareysi wasiirka arrimaha dibedda cusub ee Somalia ahna ra’iisul wasaare ku xigeen Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan ay siisay idaacadda VOA-da, waan aamini waayay waxa dhagaheyga maqleen.
Fowsiya ayaa laba mar si cad uga leexatay inay ka jawaabto su’aal ku saabsaneyd midnimada Somalia iyo arrinta Somalia iyo Somaliland, oo ay kasoo jeedo deegaan ahaan.
Weriyaha VOA, ayaa weydiiyay su’aal ahayd “Dhowr bilood ka hor waxaad aaminsaneyd qadiyadda Somaliland iyo inay tahay dal madax banaan, iminka waxaa tahay wasiirka arrimaha dibedda Somalia, dastuurka Somalia-na waxaa ku qoran in Somalia ay tahay hal, sidee ayaad isku waafajineysaa labadaas arrin”.
Jawaabtii ay bixisay ayaase ahayd “Arrimahaas waa kuwa u baahan ka feker, wada hadal………” iyo wixii kale oo ay raacin kartay oo aad wareysiga ku maqli doontaan.
Hase yeeshee mahadi ha gaartee, weriye Haarun Macruuf ayaa markii uu arkay inay arrinta ka leex leexaneyso, waxa uu si toos ah u weydiiyay “Laakin adiga iminka waxaad aaminsan tahay midnimada Somalia, soo maahan?”
Waxaase naxdin lahaa inay Fowsiya aysan jawaab u helin su’aashaas, ayada oo soo qaadatay hadal ay u nisbeysay madaxweyne Xasan Sheikh, oo ahaa “inaysan jrin wax qasab ah”.
Haddaba nala dhageyso ceebtan aqrsite, mase kula tahay in qof aan aaminsaneyn qadiyadda Somalia, uu xilkan u qalmo?
Dhageyso Wareysiga Fowsiya.